Archive du 20191218
Fifandonana teny Ankatso, Ambohipo Mpianatra 3 voasambotra, hihamafy ny hetsika
Nafana ny toe-draharaha teny Ankatso sy Ambohipo omaly. Vao maraina dia efa tonga maro be ireo mpianatra, tazana teny ihany koa ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny Emmoreg.
Manomboka ny gidragidra Miverina amin-dRajoelina ny nataony ?
18 desambra 2008-18 desambra 2019 ! Feno 11 taona katroka anio ny niantsoan’i Andry Rajoelina vahoaka hidina an-dalambe rehefa
Romule Andriamanantenasoa “Fotoana hamerenana ny fihavanana izao !”
Manomboka ny 20 ka hatramin’ny 24 desambra izao dia hikarakara ny antsoina hoe “Noely fitiavana sy fifaliana” ny kandida ho mpanolotsain’ny tanàna tao Alasora farany teo, Romule Andriamanantenasoa sy ny ekipany.
Fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara Mbola ezaka ny fametrahana azy
Tsy tafapetraka amin’ny tokony ho izy ary tsy mirindra mihitsy ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. T
Tsy fantatra ny antony Karohina i Berija Ravelomanantsoa
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fikambanana Tafaray izay tarihiny dia nisy ny fampanantsoana ny filohan’ity fikambanana ity, ny Dr Berija Ravelomanantsoa,
Fampandrosoana Vonona hizara ny traikefany ny Indianina
Nanatanteraka fitsidihana tamim-pomba fifanajana ny filohan’ny antenimierandoholona Rivo Rakotovao sy ny mpiara-miasa aminy ny Mavoivohon’i Inde Abhay Kumar omaly.
Nosy manodidina « Azo alaina ao anatin’ny 3 taona »
Aleo tara toy izay tsy misy ny fitakiana ireo nosy manodidina na nosy malagasy, hoy ny avy eo anivon’ny sendikan’ny
Basket Africa League Elite 16 Tsara fanombohana ny GNBC Madagasikara
Tsara fanombohana ny ekipan’ny GNBC Madagasikara fa nibata fandresena tamin’ny lalao voalohany natrehany any amin’ny
Baolina kitra UFFOI U 20 vehivavy 2019 I Rodrigues no hihaona amin’i Madagasikara anio
Nanao ady sahaly 1-1 tamin’i La Réunion tamin’ny andro voalohany ny ekipa vehivavy U 20 Malagasy miatrika ny fifaninanana baolina kitra
Orange Pro League Malagasy Mitarika an’isa ankehitriny ny Cosfa Analamanga
Taorian’ny andro faha-8 notontosaina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo dia ny ekipan’ny Cosfa Analamanga indray ankehitriny no mitarika
Club Firaisana Sab-Nam Hanao fihaonambe eny Anosy Avaratra
Hanatanteraka fihaonambe iantsoany an’ireo mpilalao rehetra nandalo tao aminy eny Anosy Avaratra amin’ny sabotsy 21 desambra 2019 ho avy izao ny kliobana baolina kitra FSN na Firaisana Sab-Nam.
Madiva hifarana ny taona 2019 ary hita ho miha mafana hatrany ny toe-draharaham-pirenena ao anatin’izao akatoky ny fety izao.
Mpitaingina moto voahosin’ny kamio Niparitaka ny atidohan’ilay vehivavy
Nipotsaka tanteraka ny lohan’ilay vehivavy voahitsaky ny kamio tetsy Anosipatrana akaikin’ny « lavage » na « arrêt akondro » omaly hariva tokony ho tamin’ny 5ora.
Fitaterana ana habakabaka Tsy mety tafarina ny Air Madagascar
Ny 30 novambra 2017 no nisy fifanarahana nataon’ny fitondrana teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny kaompania Réunionais Air Austral momba ny fanarenana ny kaompaniam-pitaterana Malagasy.
Seces Nasionaly Manameloka ny fitifirana mpianatra
Raikitra indray ny fifanandrinana teo amin’ireo mpianatr’Ankatso sy ny mpitandro filaminana teny amin’ny oniversiten’Antananarivo omaly.
Fananantany Kara-tany 2 tapitrisa hozaraina ao anatin`ny efa-taona
Ny 90%-n`ireo raharaha eo anivon`ny fitsarana dia resaka fananantany ary miha mahazo vahana ankehitriny. Zo fototra izy io ary antoky ny fampandrosoana ka zava dehibe ny fampafahantarana azy eny ifotony.
Fanoratana ny tany Mbola sarotra ny fombafomba eto Madagasikara
Atrikasa hanamorana ireo fombafomba hanoratana ny taratasin-tany no natao tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina.
RSE CNaPS Nanolotra fanomezana ho an’ny Orchidées blanches
Tontosa tetsy amin’ny Orchidées Blanches Androhibe omaly talata 18 desambra maraina ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny olona sembana ara-tsaina.
Faritra Bongolava Iray volana nijaliana rano ny mponina, niakatra ny vidin’ny jiro
Tao anatin’ny iray volana sy tapany mahery izao, dia nijaly tamin’ny famatsiana rano ny mponina tao amin’ny faritra Bongolava.
Hazandrano ao amin’ny farihin’Alaotra Mandeha ny aferan’ny mpiasan’ny jono sy ny polisy…
Mihidy tsy azo hakana hazandrano ny farihin’Alaotra amin’izao fotoana izao, ary afaka herinandro eo vao hisokatra.
Fahapoizinana ara-tsakafo faobe Tranga fito no niseho ny taona 2019
Betsaka ireo fahapoizinana ara-tsakafo faobe nitranga teto an-drenivohitra tamin’ity taona 2019 ity. Raha araka ny resaka
Fikambanana ASSANATI FAMO Gidraka Hanampy ireo traboina vokatry ny rivodoza ao Soalala
Mitohy hatrany ny asa soa tanterahin’ny fikambanana Assanati Famo Gidraka, izay tarihin’ny filohany Rtoa Assanati.
MINISTERAN’NY HARENA ANKIBON’NY TANY
Tonga nitsidika ny minisiteran’ny harena ankibon’ny tany ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena omaly tetsy Ampandrianomby.
Andohan’Analakely Voaroban’ny jiolahy ny « versement » n’ilay taksibe
Jiolahy mihoatra ny efatra miseho ho mpiandry taksibe no nandrombaka ny vola mitentina iray hetsy ariary mahery teny an-tanan’ny mpamily mpanampy.
VAKY TRANO TENY 67HA Navotan’ny varavarana nianjera ilay mpivarokena
Teo am-pivoahana ny trano fivarotan-kena no nianjera tampoka ny varavarana ka nitsoaka ireo mpangala-kena.